August 2019 - Page 4 of 6 - Puntland Mirror Believable Media Website
Muqdisho-(Puntland Mirror) Saraakiisha ciidamada Soomaaliya ayaa sheegay in ugu yaraan shan askari iyo sawirqaade ka ag-dhawaa ciidamada lagu dilay weerar maanta oo Arbaco ah ay maleeshiyada Al-Shabaab la beegsadeen saldhig ciidan oo kuyaala magaalada Awdhiigle […]
Somali military officers say at least four soldiers and a photographer embedded with the army were killed in an attack by Islamic extremists on an army base in the town of Awdhegle, southwest of the […]
Kismaayo-(Puntland Mirror) Guddiga doorashooyinka Jubbaland ayaa maanta oo Arbaco ah soo saaray jadwalka doorashooyinka madaxweynaha. 19-ka bishaan Agoosto ayay dhici doontaa doorashada madaxweynaha Jubbaland, sida uu muujinayo jadwalka ay sii daayeen guddiga doorashooyinka. Talaadadii, xubnaha […]
August 13, 2019 Puntland Mirror 0
Garoowe-(Puntland Mirror) Puntland ayaa noqotay dowladii ugu horeysay oo xubin ka ah federaalka Soomaaliya oo hambalyo u dirta baarlamaanka cusub ee la soo dhisay ee Jubbaland. War-saxaafadeed ka soo baxay madaxtooyada maanta oo Talaado ah, […]
Seoul-(Puntland Mirror) Dalka Koonfur Kuuriya ayaa u soo dirtay ciidamo cusub badaha Soomaaliya si ay halkaas uga sameeyaan howlgal lagula dagaalamayo burcadbadeeda, sida ay ku warantay wakaalada wararka Yonhap. Ciidanka ayaa qorshuhu yahay in galabnimada […]
August 12, 2019 Puntland Mirror 0
Baran-(Puntland Mirror) Ciidamada Puntland ayaa maanta oo Isniin ah saddex xubnood oo looga shaki qabo Al-Shabaab ku qabtay magaalada Baran ee gobolka Sanaag, sida ilo-wareedyo haayadaha ammaanka katirsan ay u sheegeen warbaahinta. Hal mid oo […]
August 11, 2019 Puntland Mirror 0
Garoowe-(Puntland Mirror) Gobolada Puntland ayaa maanta oo Axad ah looga dabaaldegay Ciidul Adxa. Magaalada caasimada ah ee Garoowe, salaada ciida ayaa lagu tukaday masaajidyada iyo garoonka kubada cagta Mire Awaare, halkaas oo ay isugu tageen […]
August 10, 2019 Puntland Mirror 0
Garoowe-(Puntland Mirror) Puntland ayaa hakisay aqoonsiga nabadoonada cusub, sida lagu sheegay war-saxaafadeed kasoo baxay wasaaradda arrimaha gudaha Puntland. “Wasaaradda Arrimaha Gudaha, Federaalka iyo Dimuqraadiyaynta Dowladda Puntland waxay ku wargelinaysaa dhammaan guddoomiyaasha gobolada iyo degmooyinka, inay […]
Somali football returns to African continental club competition for the first time in 29 years this weekend, Mogadishu City Club compete in the second string Confederation Cup against Zanzibar’s Malindi in the first round, first […]